Musharaxa madaxweyne ku xigeenka Maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku eedeeyay Madaxtooyada inay fara gelin ku heyso Doorashada Hirshabeelle +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Musharaxa madaxweyne ku xigeenka Maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku eedeeyay Madaxtooyada inay fara gelin ku heyso Doorashada Hirshabeelle +Cod
Musharaxa madaxweyne ku xigeenka Maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Xasan Taakow ayaa ku eedeeyay dowlada Federalka inay farogelin ku hayso shirka maamul u sameynta Hirshabeelle, waxana uu sheegay in shirka uu xiran yahay.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Jowhar ayuu ku sheegay in mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federalka kana wakiil ahayd madaxtooyada Soomaaliya ay timid Jowhar iyadoo lacag badan wadata taasoo doorashadii laaluushtay.
Sidoo kale musharax Taakow ayaa ugu baaqay duubabka dhaqanka iyo wasaarada arrimaha gudaha inay faraha kala baxaan shirka.
“Wixii shalay ka dhacay ma aqoonsanin shirkana waan joojinay illaa laga helaayo hanaan hufan oo ummada u siman atahay dadka labada gobolna ku heshiiyaan haddii la isku dayo in dib loo bilaabana wixii ka soo baxa mas’uuliyadeeda waxaa qaadaya dowlada.”ayuu yiri Musharax Taakow.
Isagoo ka hadlayay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Jowhar ee lagu doortay shir guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayuu sheegay Mudane Taakow in doorashada xildhibaanadii joogay iyo kuwii codeeyay aysan isku mid ahayn taasoo ah mid caddaalad darro ah.
“Waxaa ka cabaneynaa Xildhibaanad ka keentay Madaxtooyada Soomaaliya, lacag tiro badan waxay arrintaas keentay musuq maasuq iyo cadaalad daro inay meesha ka dhacdo”ayuu yiri Musharax Cali Xasan Taakow.
Sidoo kale musharax Taakow ayaa ka hadlay ka bixitaanka shirka ee beesha Shiidle isagoo sheegay in musharax ay lahaayeen beesha Shiidle iyo xildhibaanadooda oo jooga aysan ka qeybgalin doorashada.
“Dad isu soo taagay inay doorashada ka qeybqaataan kana soo jeeda gobolka Sh/dhexe ayaa madaxtoyada laga soo amray oo ka soo bax magaalada la yiri.”ayuu yiri Musharax Taakow.
“Waxaa jira Liis laga soo qoray Madaxtooyada, kuwaasoo dad gaar ah oo Musharaxiin lagu wato oo la leeyahay hebel haku soo baxo Guddoomiyaha Baarlamaanka, hebel haku soo baxo Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka, waxaa marka go’aan ku qaadanay in gebi ahaanba aan shirka ka baxno”ayuu yiri Cali Xasan Taakow.
Hadalkan ka soo yeeray Musharaxa Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Hirshabeelle ayaa ah mid culeyskiisa wata, waxaana uu daboolka ka qaadayaa shakiga laga qabay in xubno Musharaxiin ah oo la rabo inay ku soo baxaan xilalka ugu sareeya Maamulka Hirshabeelle.